Programming · Programming For Beginner
ကျွန်တော်တို့ Computer မသုံးရင်တောင် Phone တွေကို နေ့စဉ် အသုံးပြုဖူးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ phone တွေ အသုံးပြုရင် App တွေကိုလည်း အသုံးပြုမိကြမှာပါ။ App တွေက ကျွန်တော်တို့ အတွက် မျက်လှည့် ပစ္စည်းလိုပါပဲ။ လိုချင်တာတွေကို ထွက်လာဖို့ screen ပေါ်မှာ လက်နဲ့ နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Programmer တွေ က App တွေ Program တွေကို ရေးစွဲထားပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ လွယ်ကူအောင် ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ Programmer တွေဟာ programming language တစ်ခုခု ကို အသုံးပြုပြီး app တွေကို ဖန်တီးကြပါတယ်။ Programming language ကို အသုံးပြုပြီး program တွေကို ရေးသားပြီး နောက်ဆုံး App အနေနဲ့ ထွက်လာတာပါ။
Game တွေဟာလည်း programming language နဲ့ ရေးသားထေားပါတယ်။ ဒါကြောင့် App တွေ Game တွေကို ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် Programming ကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Computer ဟာ အလိုအလျောက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ Computer နားလည်တဲ့ ဘာသာစကား နဲ့ computer ကို ခိုင်းစေရပါတယ်။ ဥပမာ။။ Viber မှာ call ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒီလူ ရဲ့ ဖုန်းကို သွားခေါ် ဆိုပြီး ရေးသားထားရပါတယ်။ ဒါမှ သုံးစွဲ သူက Call ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဖုန်း သွားခေါ်ပေးပါတယ်။
Microsoft Words မှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ Print ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် printer ကနေ စာထွက်လာအောင် ဆိုပြီး programming နဲ့ ရေးသားထားရပါတယ်။ သုံးစွဲ သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ print ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ printer ကနေ print ထုတ်ပေးပါတယ်။
Computer ဟာ0နဲ့ 1 ကို သာ သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့0နဲ့ 1 နဲ့ ရေးဖို့ အရာမှာ မလွယ်ကူလှတဲ့ အတွက် high level language တွေကို အသုံးပြုပြီး computer ကို ခိုင်းစေအောင် ရေးသားကြပါတယ်။ Computer ကို ခိုင်းစေတတ်တဲ့သူဟာ programmer ဖြစ်လာပါတယ်။
Progrommer ဟာ သုံးစွဲ သူ နဲ့ computer ကြားမှာ ကြားခံ အနေနဲ့ သုံးစွဲ သူ ခိုင်းစေလိုတာတွေကို computer နားလည်အောင် ရေးသားပေးရတဲ့ သူပါ။ Programming language ကတော့ ဘာသာစကား တစ်ခုပါပဲ။ computer နဲ့ programmer ကြားမှာ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ဘာသာစကားပါ။ Computer ဟာ အလိုအလျောက် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ Programmer ဟာ computer ကို ဒါလုပ် ဒါလုပ် စသည် ဖြင့် ခိုင်းစေရပါတယ်။
အောက်က code မှာ computer ကို screen ပေါ်မှာ Hello World! ဆိုပြီး ရိုက်ပြခိုင်းပါတယ်။ Run ဆိုတာလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Hello World! ဆိုပြီး ပေါ်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။